Ime Anwansi UI 4.0 zuru ụwa ọnụ melite-asọpụrụ Honor 20, 20 Pro na V20 | Gam akporosis
na Sọpụrụ 20, V20 na V20 Ha enweelarị anwansi anwansi anwansi na China, dika emuputara nwelite ahu na mbu, na ekwuputaghi ndi ozo maka uwa. Agbanyeghị, amaara na a ga-enye OTA n'ụwa niile, nke ahụ bụ ihe na-eme ugbu a.
Igwe ekwentị atọ ndị a anabatalarị ngwugwu ọhụụ ọhụrụ na-agbakwunye ụdị zuru ụwa ọnụ nke Ime Anwansi UI 4.0, na ọtụtụ ọrụ na atụmatụ ọhụrụ na-abịa iji melite ahụmịhe onye ọrụ.
Ime Anwansi UI 4.0 na-agbasa gburugburu ụwa maka Honor 20, 20 Pro na V20
Couplebọchị ole na ole, ọhụrụ Magic UI 4.0 melite, nke a na-enye site na OTA, na-agbasa gburugburu ụwa, dị ka anyị na-emesi ike. Agbanyeghị, ọ nwere ike ọ gaghị adị na mpaghara niile, nke a bụ n'ihi iwepụ nwayọ nwayọ.
N'otu aka ahụ, enweela ọtụtụ ndị ọrụ nke mobiles atọ a na Europe na South na North America bụ ndị kọọrọ na ha nwetara ngwugwu ngwa ngwa ahụ ekwuru. Ya mere, ọ bụrụ na ịnabatabeghị ọkwa nke mbata nke Magic UI 4.0 zuru ụwa ọnụ na ọnụ gị, gaa na ntọala ya, gaa na mmelite na ngalaba ngwanrọ, ma lelee; O nwere ike ọ gaghị agwa gị ọbịbịa ya, mana ịnwere ike ibudata ma wụnye ya.
Mmelite ahụ dabere na EMUI 11 wee bịa na nọmba ụlọ 11.0.0.138. Ihe bụ ihe ọzọ, nwere arọ nke ihe dịka 1.84 GB, yabụ anyị anaghị ekwu maka obere mmelite. Ọ dabere na gam akporo 10 yana wepụta ya na Google Mobile Services.
N'aka nke ọzọ, na mgbakwunye na ịbịakwute akụkọ na atụmatụ dị ka isiokwu nka, mmekorita multiscreen, mmegharị ahụ dị mma, akwụkwọ ọgụgụ buru ibu, mmetụta dị nro, ụdaolu ụda na ndị ọzọ ọ juru na ọtụtụ ahụhụ fixes, dị iche iche software optimizations, na usoro kwụsie ike ndozi.
Icheta, Honor 20 na 20 Pro na Honor V20, nwere Kirin 980 processor chipset si Huawei. Igwe okwu mkpanaka a nwere isi asatọ nwere ike ịrụ ọrụ na max. 2.6 GHz. N'ihe banyere nke mbụ, e nwere nhọrọ RAM abụọ, nke bụ 6 na 8 GB, dịka na Honor V20, mana na 20 Pro enwere naanị otu, nke bụ 8 GB. Ihe atọ ndị a na-ekere bụ oghere dị n'ime nke 128 ma ọ bụ 256 GB ikike.
Na Honor 20 na 20 Pro nwere ihuenyo teknụzụ IPS LCD nke nwere akara ngosi 6.26 nke anụ ọhịa na mkpebi FullHD + nke 2.340 x 1.080 pikselụ. Ogwe V20 dị ntakịrị, n'ihe dị ka sentimita 6.4 na mkpebi nke 2.310 x 1.080p.
Usoro igwefoto nke mbụ dị okpukpu anọ, dịka nke ụdị abụọ ndị ọzọ. Nke a nwere ihe mmetụta 48 MP, ihe ntanye anya nke 16 MP na ndị ọzọ 2 MP nnukwu na bokeh shooters. Na Honor 20 Pro, 2 MP telephoto dochiri ihe mmetụta 8 bokeh sensọ, ebe na Honor V20 enwere naanị igwefoto igwefoto 48 MP + ToF sensor. N'aka nke ya, n'otu n'otu, enwere sensọ selfie 32 MP na Honor 20 na 20 Pro na 25 MP otu na nke ikpeazụ.
N'ụzọ nkwanye ùgwù, batrị maka nke ọ bụla bụ ikike 3.750, 4.000 na 4.000 mAh, ha niile kwekọrọ na teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa 22.5 W. N'ikpeazụ, ọ bara uru iburu n'uche na ebuputara ha na gam akporo 9 Pie, yabụ ha nwere ike ịnweta gam akporo 11 n'afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ime Anwansi UI 4.0 Global Mmelite Na-abịa Nsọpụrụ 20, 20 Pro na V20